Sida loo ilaaliyo loona ilaaliyo sirta sirta ah | Golaha Moobaylka
Ignacio Sala | | Microsoft Excel, Qalabka otomaatiga
Ilaalin sirta la ilaaliyo Excel Waxay noqon kartaa geedi socod dhib badan ama ka yar oo kuxiran arrimo kaladuwan. Amniga ay Microsoft ka hirgeliso xafiiska Office waa mid ka mid ah kuwa ugu amniga badan, dib u dhigista ayaa u qalantaa, maaddaama ay tahay dalabka ugu isticmaalka badan adduunka in la abuuro dukumiinti.
Waqtiga ilaali dukumiinti labadaba Excel iyo Word iyo PowerPoint, waxaan heysanaa fursado kala duwan. Kaliya kuma dari karno koodhka marin-u-helka, laakiin waxaan sidoo kale ilaalin karnaa dukumintiga in wax laga beddelo oo sidaas ayaan uga hortegi karnaa nuqulada dukumeentigayagu inuu ku dhex wareego wax ka beddello annaga lagu sameeyay.
1 Maxaan ku ilaalin karaa dukumiintiga Excel
2 Sida loo ilaaliyo dukumiintiga Excel
2.1 Ka fogow sixitaanka xaashida 'Excel'
2.2 Ka fogow sixitaanka buugga shaqada ee 'Excel'
3 Sida password loo ilaaliyo dukumiintiga Excel
4 Sida loo furo Excel oo leh lambarka sirta ah
4.1 Fur Excel si aad u tafatirto
4.2 Fur Excel si aad u aqriso
Maxaan ku ilaalin karaa dukumiintiga Excel
Excel ayaa na siisa laba qaab si loo ilaaliyo dukumintiyadayada:
Difaac buugga. Hawshan waxaa loogu talagalay inay ka hortagto qof kasta oo kale inuu sameeyo nooc kasta oo isbeddel ah dhammaan waraaqaha qayb ka ah dukumintiga Excel. .
Ilaali xaashida. Haddii aan kaliya dooneyno inaan ilaalino mid ka mid ah go'yaasha qeyb ka ah feylka Excel (sida isha xogta ku jirta shaxda) oo aan uga tagno inta ka hartay go'yaasha feylka 'Excel file', waxaan ku sameyn karnaa howshaan.
Labada shaqoba waxaa laga heli karaa cajalad sare fursadaha, qaybta Dib u eegid, la kala jiiday Ilaali.
Laakiin sidoo kale, iyadoon loo eegin qaybta dukumiintiga ee aan ilaalineyno, waan furi karnaa meelaha qaarkood si markaa wax looga beddeli karo ikhtiyaarka U oggolow kala duwanaanta wax ka beddelka.
Sida loo ilaaliyo dukumiintiga Excel
Sidii aan uga faallooday tuducii hore, Excel wuxuu na siinayaa laba dariiqo oo lagu ilaaliyo dukumiintiyada aan ku abuurnno codsigan. Waxay kuxirantahay habka aan doorano, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan marin u helno ama aan u haysanno dukumiintiga si aan u aragno oo aan u beddelno.
Ka fogow sixitaanka xaashida 'Excel'
Haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan ka hor istaagno kuwa qaata xaashidayada 'Excel' inay wax ka beddelaan, waa inaan ka faa'iideysanno hawsha Ilaali xaashida. Hawshan waxaa laga heli karaa xarigga sare ee xulashooyinka, qaybta Dib u eegid, la kala jiiday Ilaali.
Kahor xulashada ikhtiyaarkan, waa inaan Xullo noocyada unugyada aan rabno inaan ilaalino. Si tan loo sameeyo, waa inaan gujino geeska bidix ee kore oo aanaan sii deyn jiirku u jiido geeska midig ee hoose halka xogta ku taal.
Marka xigta, dhagsii xulashada xaashida 'Protect sheet'. Marka xigta, waa inaan gali ereyga sirta ah (2 jeer) taas ayaa noo oggolaan doonta inaan wax ka beddelno tirada unugyada aan xulanay.
Mararka qaarkood, maahan oo keliya xogta inay muhiim tahay, laakiin sidoo kale qaabka. Fursadaha lagu ilaalinayo xaashida gudaheeda, waxaan sidoo kale ka hortegi karnaa kuwa qaata dukumintiga inay u adeegsadaan qaabaynta unugyada, tiirarka iyo safafka, gelinta tiirarka iyo safafka, gelinta xiriiriyeyaasha, tirtirida safafka ama tiirarka ...
Sida loo sameeyo miis udub dhexaad u ah Excel dhibaato la'aan
Ka fogow sixitaanka buugga shaqada ee 'Excel'
Si looga hortago qof kasta inuu wax ka beddelo dhammaan nuxurka dukumiintiga Excel waa inaan marinnaa xargaha kore ee xulashooyinka, qaybta Dib u eegid, la kala jiiday Ilaali oo xulo Difaac Buugga.
Marka xigta, waa inaan galnaa eray sir ah (2 jeer), lambar sir la'aan ah, qofna awood uma yeelan doono inuu isbedel ku sameeyo dukumintiga oo dhan, markaa waa inaan markasta gacanta ku haynaa, ku qornaa arjiga maareynta lambarka sirta ah iyo / ama la wadaagnaa dadka marin u heli doona dukumiintiga.
Sida loo sameeyo liiska hoos u dhaca Excel
Sida password loo ilaaliyo dukumiintiga Excel
Ha ku qaldin ka ilaalinta dukumiintiga wax ka beddelka sir dukumiinti leh erey sir ah si gabi ahaanba qof aan lahayn lambarka sirta ah uusan u geli karin. Markaad dukumiinti kuqarinayso erey sir ah, haddii aynaan garanayn, weligeen awood uma yeelan doonno inaan marinno nuxurkeeda.
Shaqada ereyga sirta ah Waa suurtagal in la isku daro howlaha noo oggolaanaya inaan ilaalino buug ama xaashi daabacan, maadaama ay yihiin shaqooyin gebi ahaanba madaxbannaan oo aan midba midka kale la xiriirin.
para ku dar erey sir ah dukumiintiga Excel waa inaan fulino talaabooyinka soo socda:
Marka hore, guji Diiwaanka si loo helo sifooyinka dukumiintiga ee aan rabno inaan ilaalino.
Marka xigta, dhagsii Macluumaadka.
Markaas ayaan gujineynaa Difaac buugga waxaanan qoreynaa lambarka sirta ah (2 jeer) kaas oo ilaalin doona helitaanka buugga.
Waa in la xusuusnaado in furahan sirta ah waa inaynaan lumin maadaama aan waayi doono ikhtiyaarka aan ku heli karno.
Sida loo furo Excel oo leh lambarka sirta ah
Fur Excel si aad u tafatirto
Xalka ugu fudud bilowga, wuxuu maraa ku keydi dukumintiga qaabab xaashida ah xisaabinta codsiyada kale, sida midka ay bixiso LibreOffice. Si kastaba ha noqotee, markii nala ilaaliyo, waa inaan galnaa kahor badalashada.
Qaabka kaliya ee aan ugu dhoofin karno miiska si aan hadhow wax uga bedelno (waqti dheer ma qaadan karto) waa PDF. Markaad u dhoofiso PDF-kan waxaan hadhow abuuri karnaa dukumiinti cusub oo 'Excel' ah oo leh howsha noo ogolaaneysa inaan ku ogaanno miisaska sawirrada.
Nuqul iyo dhaji waa xalka ugu fudud. In kasta oo ay u muuqan karto wax aan caqli gal ahayn, hab lagu heli karo waxyaabaha laga ilaaliyo kahortaga wax ka beddelka feyl faylka 'Excel' waa nuqul ka sameynta oo ku dhaji xaashida cusub, illaa inta hawshaas aan laga jarin xulashooyinka ay bixiso hawshu. si loo ilaaliyo.
Fur Excel si aad u aqriso
Sirta ay Microsoft isticmaasho si ay u ilaaliso dukumiintiyada aan sameysano si qof aan furaha u helin uusan u helin macquul ma ahan inuu jabiyo, ilaa aan u adeegsano barnaamijyada xoog caayaan kuwaas oo u heellan inay tijaabiyaan ereyada sirta ah.
Laakiin tan, waxaan u baahanahay waqti badan, maadaama tirada isku dhafka suurtagalka ah ay aad u sarreyso tan iyo markii ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan furaha sirta ah ee aan u isticmaalno dhererka (on Windows), jilayaasha ama lambarrada. Iyaguna waa kuwo xasaasi u ah kiiska. Mac, cabirka ugu badan ee furaha ereyada ee aan u adeegsan karno ilaalinta dukumiinti waa 15 xaraf.
Ha ku mashquulin raadinta xalka internetka. Haddii aadan aqoon erayga sirta ah ee faylka la duubay, weligaa awood uma yeelan doontid inaad gasho. Microsoft, sida lagu sheegay websaydhkeeda, kaaama caawin karto inaad ka joojiso gelitaanka faylka sidoo kale, sababaha aan ku sharaxay cutubkii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Sida loo ilaaliyo Excel oo leh lambarka sirta ah
VA vs IPS vs TN: shaashadee u fiican kombuyuutarkaaga?